गोपाल झापाली : "क्षतिको तथ्याङ्कमा एकरुपता नआउनु सञ्चार माध्यमको कमजोरी बन्यो" - DISASTER REPORTING RESOURCES FOR THE MEDIA
गोपाल झापाली : “क्षतिको तथ्याङ्कमा एकरुपता नआउनु सञ्चार माध्यमको कमजोरी बन्यो”
“पूर्व सन्देश” दैनिकको कार्यालय झापाको दमक ११ मा छ । म त्यहिँ काम गर्दै थिँए । फेरि हाम्रो कार्यालय रहेको भवन निक्कै कमजोर पनि छ । बैशाख १२ मा पनि काम गरिरहेका बेला शुरुमा अलिकति कम्पन आयो, खासै याद गरिएन । नजिकै सडक भएकाले त्यहाँ गाडी कुद्दा पनि थर्किन्थ्यो । त्यहि होला भनियो । तर तल सडकमा “भुइँचालो” भन्दै मानिसहरु कराउन थालेपछि केहि सोच्दै नसोचि दौडियौं । चार-पाँच जना थियौं कार्यालयमा । तल पुगेर सडकको रेलिङ् समाउँदा पनि पुरै धर्ती काँपिरहेको थियो । कार्यालय रहेको घर हल्लिरहेको थियो । सडक मानिसै मानिसले भरिएको थियो ।
भुकम्प गएपछि निक्कै बेर रिंगटा लागे जस्तो भयो । काम गर्न मन लागेन । कार्यालय छिर्न पनि डर लाग्यो । धर्ती हल्लि रहे जस्तो भयो । यो क्रम त करिव १ महिनानै भयो ।
त्यस बेला शुरुमा परिवारको याद आयो । फोन गर्दा फोन पनि लागेन । निक्कै पछि सम्पर्क भयो ।
त्यस बेला तपाईंले के-कस्ता सूचना खोज्नु भयो? तपाईंले आवश्यक सुचनाहरु पाउनु भयो त? (What types of information were you looking for at that time? Did you have access to all the information you needed?)
तत्कालै त कत्रौ भुकम्प गयो, केन्द्र कहाँ हो र कति क्षती भयो भन्ने सूचना खोजियो । ईन्टरनेटमा ध्यान केन्द्रित भयो ।
रेडियो, टेलिभिजन, समाचारपत्र, अनलाईन जस्ता समाचार स्रोतहरु तपाइलाई जानकारी दिन कत्तिको उपयोगी साबित भए? मिडियाका कुन पक्ष कमजोर, कुन पक्ष सबल रहे? (How helpful were news media such as radio, television, newspapers, online news portals, etc in informing you immediately after the quake and the days following it? Please note their strengths as well as weaknesses).
सवै भन्दा उपयोगी त, ईन्टरनेट भयो । बिभिन्न वेबसाईटहरु । अरु त ठिकै हो, क्षतिको तथ्याङ्कमा एकरुपता नआउनु सञ्चार माध्यमको कमजोरी बन्यो ।
भुकम्प पछिको साता त्रासमय भयो । आफ्नो जिल्लामा बढि क्षति नभए पनि राजधानीमा धेरै आफन्तहरु भएकाले धेरै पिरोलिइ रहियो । राती कोठामा सुत्न साह्रै त्रास भयो ।
भुकम्प गएको साताको स्मरणीय कुरा, बारम्बार धर्ती हल्लिएको भान हुनु र कतारमा गएको भाइले अवस्था बुझ्न घरका सवै सदस्यलाई १,१ घण्टामा फोन गरि रहनु भयो ।
भुकम्पबाट सिक्ने पाठ भनेको, हामीले संरचनाहरु बलियो बनाउनु पर्यो । पत्रकारहरुले हरेक विपत्तीमा बिषय जे भए पनि तथ्यमा एकरुपता ल्याउन पहल गर्नु पर्यो आजै देखि । र, अर्को कुरा, कुनै बिद् र बिज्ञको भरमा नपरि सावधानी रहनु पर्यो ।